Shira Fiilmii ABO Diiguu Haara-Qulqullaa’eera! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira Fiilmii ABO Diiguu Haara-Qulqullaa’eera!
Shira Fiilmii ABO Diiguu Haara~Qulqullaa’eera!
Jawaar Mahaammad KFOtti ida’ame .
Akka odeessi keessa beektota KFO irraa bahaa jirutti paartii KFO bakka bu’ee yoo dorgomee moo’ee caffee gale mootummaanis tahe warri KFO aangoo dabarsinee guutummaatti siif kennina ati President mootummaa naannoo oromiyaa taata ittiin jedhanii akka inni dorgomuuf KFO keessa taa’ee gochaa jiru.
Jawaar Mahaammad erga warra KFO waliin walitti dabalamee meeshaalee waajjira KFOf barbaachisan guutummaatti bitee guuteef jira.
Jawaar Mahaammad KFOtti dabalamuun gaariidha garuu deemsi amma karaa shira xaxxootaa jiru akka ABO fi KFOn walitti hin makamneef cimsanii irratti hojjechaa jiru.
Jawaar erga KFO keessa seenee filannoo ji’a jaha duubatti hiiqee gaggeeffamu ABO caalaa KFOn ni argata Jawaar waan jiruuf jedhanii olola guddaa gaggeeffamaa jira.
Walumaagalatti Jawaar KFOtti akka dabalamu kanneen godhan keessaa qondaaltota mootummaati sababni isaa Jawaar jechuun harka bitaa isaanii waan taheef erga inni KFOtti makamee ABO fi KFOn akka walitti dabalamanii dorgaman hin barbaadan . Kanas halkan guyyaa marii gaggeessaa jiru.
Activistootni tokko tokkos guyyaa guyyaa waajjira warra KFO galgala galgala immoo mootummaa waliinii fi Jawaar waliin shira xaxaa jiru.
Ummatni Oromoo ammas dhimma shira xaxxootaan gaggeeffamu ifatti beekuu qaba.
Barattoota Qaroo kanaa gadii manni Murti Bilisa Baasnaan Yunivarsiitiin Amboo Barnootatti deebisuu dide!
Gaafa Namni Daba namarratti oolu Waaqayyoo fi Dhugaan ati qabatte Bilisa si baasa!
Ijoolleen Maqaan isaanii kanaa gaditti tarraa’e Barattoota Ambo university Woliso campusti!
Daba Hoggantoonni Ambo University Irratti raawwataniin Bara darbe Xumura barnootaa(finally) irratti Tika Mootummaan hidhamani!
1_Lataa Addaamuu Computer waggaa 2ffaa
2_Lammii Jaalataa Computer waggaa 2ffaa
3_Yeeyyis Tamasgeen Accounting waggaa 1ffaa
4_Abdii Geetuu IT waggaa 3ffaa
5_Margaa Jiraataa Computer waggaa 1ffaa
6_Caalaa Dassaalee Cottom waggaa 1ffaa
7_Daawwit Hambisaa Management waggaa 1ffa
8_Nagaraa Golbaa cottom waggaa 3ffaa
9_Daraaraa Tasfaa civil waggaa 2ffaa
10_Qixxeessaa Maammoo Cottom waggaa 1ffaa
11_Iyyoobaa Maajor IT waggaa 1ffaa
12_Yooseef Bookaa Cottom waggaa 2ffaa
13_Habtaamuu Biyyarraa BIS waggaa 1ffaa
14_Fayisaa Tashoomaa Computer Waggaa 1ffaa
15_Abdurahamaan Deekoo Accounting Waggaa 2ffaa
16_Dursaa Diinoo Accounting Waggaa 2ffaa
Baatii 5 oliif hidhaa turanii mirga wabiitiin lakkifamani!
Erga Lakkifamanii Booda Hogganoonni Mooraa Yuunivarsiitii Amboo fi Walisoo
Dr Taaddasaa Qana’aa fi Dr Mokonnon Barsiisaa Aangoo isaaniitti fayyadamuun osoo Koree naamusaan hin ilaaliin Barnootarraa Waggaa Tokkoof (1f) Ariiyani!
Ijoolleen Hiyyeessaa kun akkuma ijoollee biraa barnoitaaf bahanii Daba namoota muraasaan Barnootarraa ariiyatamanii jooraa tahanii jiru!
Namni garuu waan facaase ni haammata!
Har’a Dec 23 2019 Manni Murtii dhimma kana qorachaa ture Bilisa jedhee jira!